Nezvedu - Smedtrum
Ndiani Ari Smedtrum
Smedtrum Medical Technology Co Ltd, inowanikwa mu2019, ndiyo yekutanga Taiwan-yakavakirwa uye mugadziri wezvokurapa aesthetic michina.
Inotungamirwa muNew Taipei Guta, Smedtrum inotanga sebhizimusi remuno uye inovavarira kuwedzera pasirese.
Smedtrum inogadzirwa kunze kwechishuwo chekutora chikamu mune zvekurapa zvinoshanduka aesthetics indasitiri uye kutenda kuti tekinoroji kunotiunzira hupenyu huri nani. Kuramba uchifarira, Smedtrum yakazvipira kukudziridza mhando yepamusoro zvekushandisa zvekurapa zvine chekuita nezve zvisinga-kuvhiringidza maitiro ekurapa, kusanganisira laser, Yakasimba Pulsed Chiedza, Phototherapy, uye HIFU.
Nechiedza uye simba-based tekinoroji, Smedtrum inonyanya kupa mukupa mhinduro dzekubvisa bvudzi, kudzora vanga, kusimudza ganda, uye kubvisa adipose. Mukati meiyo laser mutsara, yakagadzira yakazara nhevedzano yemidziyo kubva diode laser, CO2 laser, fiber laser, Nd: YAG laser, uye picosecond laser, zvese ku inomiririra yakanakisa yekucheka-kumucheto tekinoroji.
Yakadzika midzi mune sainzi chaiyo, timu yeSmedtrum yeR & D iri kufambira mberi matekinoroji kugonesa varapi uye varapi kupa kurapwa kwakachengeteka uye inoshanda. Sechiso chitsva muindastiri, Smedtrum anozvarwa aine vavarirouye kutsunga kuti ichatungamira indasitiri yerunako kubva kuTaiwan kusvika mahombekombe epasi rese.
Smedtrum ndiyo yekutanga mhando pasi peSmedtrum Co, Ltd. iyo inonyanya kugadzirisa mu kuvandudzwa kwekurapa kwekushongedza zvigadzirwa. Zita "Smedtrum" ndiroyakagadzirwa kubva mukubatanidza mazwi maviri, "Spectrum" uye "Mushonga,"inomiririra kuzvipira kwatakaita kunzanga, izvo kuburikidza nemifananidzo tekinoroji, tiri kuenda kumberi kune nyika ine hupfumi uye iri nani.
Tekinoroji Inounza Runako Rwako
"Iva Chishamiso Chinopenya" ndizvo zvatinoda kuona kubva kune wese munhu. Tinotenda munhu wese anofanirwa kuona yavo nguva inopenya. Uku ndiko kutangakwatiri kuti tirambe tichiisa mari muzvigadzirwa zvetekinoroji. Kubva kare uye zveramangwana, isu tiripano kugadzira, kununura uye kupupurira chimwe chishamiso nguva dzinouya kubva kwauri.
Mukubatana kwesimba rekurapa reTaiwan uye kugona kugona, chinangwa chedu ndeche kuve mugadziri wepasi rese wezvigadzirwa zvekurapa zvekushongedza. Pamusoro pe izvozvo,isu tiri munzira yekugadzira tangi rekufunga rakavakirwa muTaiwan, rakaumbwa ne nyanzvi muR&D, mainjiniya uye ongororo, kupa technical uye R&D tsigiro pamwe nekunzwisisa kwemaindasitiri uye mazano ebhizinesi. Aya ndiwo maitiroSmedturm ichave mutyairi weiyo yekurapa aesthetics indasitiri muTaiwan, kushanda nekukura pamwe chete nenharaunda yeesesthetics.
Isu tinokura nemaonero epasirese uye tinovavarira kubatanidza kumusoro
Isu tinounza matarenda anokurudzira pamwechete uye tinotarisa pa
chaiyo sainzi yekuvandudza muhunyanzvi.
Isu takanangana nezvakawanda uye tinopfuura
zviyero zvepasi rose kupa zvakanakisa
Tinozvidzivirira pachedu nehunyanzvi
kuvandudza uye kuvaka kwenguva refu